स्वस्तिमा अमेरिकन फिल्ममा काम गर्दैछिन् ? – Brother-mart
स्वस्तिमा अमेरिकन फिल्ममा काम गर्दैछिन् ?
by Ashim Prasai on May 07, 2020
फिल्मी फण्डा । छोटो समयमा आफ्नो करिअरलाई नेपाली फिल्ममा स्थापित गर्न सफल नायिका हुन् स्वस्तिमा खड्का । शुरुमा उनलाई नायिकाको रुपमा लिन नसकिने धेरै फिल्मकर्मीहरुको विचारलाई भंग गर्दै उनले करिअरमा सफलता हात पारिन् । एकाध फिल्म बाहेकमा उनलाई रुचाइएको छ ।
फिल्म सफल र असफल जसो हुदाँपनि उनको चर्चा भने सफलतातिर दौडिरहेको हुन्छ । पछिल्लो समय फिल्म ‘बुलबुल’बाट उनको चर्चा अझ चुलिएको हो । नेपाल यतिखेर लकडाउनमा छ । लकडाउनको कारण मनोरञ्जन क्षेत्र शतप्रतिशतले शुन्य
पछिल्लो समय ‘बुलबुल’बाटै राष्ट्रिय अवार्ड समेत हात पार्न सफल नायिका स्वस्तिमा एक अमेरिकन समूहले निर्माण गर्न लागिएको अमेरिकन फिल्मको लागि अनुबन्ध भएको जानकारी बाहिरिएको हो । यस विषयमा फिल्मी फण्डाले स्वस्तिमा खड्कालाई सोध्दा उनले समाचार सत्य भएको दावी गरिन् ।